Samsung Galaxy Data Recovery: ceshano files lumay ee Samsung Galaxy
Samsung Galaxy Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Faylal ay ku Samsung Galaxy
Ma waxaad leedahay taleefankiisa Samsung Galaxy Smart? Samsung Galaxy Taxanaha waa mid ka mid ah taxanaha caanka ah ee telefoonada smart maanta, oo kala duwan oo ka miisaaniyadda dhexdhexaad ah in lagu daydo flagship. Currently, daydo qod6 cusub ayaa la sii daayay taasoo ah qaadaan badan oo dareenka iyo waa in tartan toos ah la Apple ee iPhone 6 iyo 6S.
Inkasta oo lahaanshaha taleefan Galaxy ka dareemi kartaa cajiib ah, waxaad u baahan tahay in aad daryeelka aad telefoon qaataan si ay u ulo kula muddo dheer. Sida telefoonada loo isticmaalo, iyo jir ah, wax badan oo ka mid ah arrimaha soo bixi kara. Qaar badan oo ka mid ah dhibaatooyinka ugu kici ay sabab u tahay isticmaalka culus oo aan daryeel ku haboon. Tusaale ahaan, haddii aadan la xiro barnaamijyadooda socda ee asalka ah, waxaa gubtay, RAM aad u badan, taasoo keentay in gaabiyo qalab iyo kulayl batteriga.
Dhibaatada kale ee waa khasaaraha xogta. Qalabka Samsung Galaxy ayaa sidoo kale arkay arrimaha la xiriira khasaaraha xogta. Halkan waxa ku jira saddex sababood oo khasaaro xogta ku dhacaa qalabka.
1. Inta badan telefoonada waa ay ku xidhan tahay kaarka SD ay sabab u tahay meel bannaan oo gudaha u hooseeya. Sababo la card SD musuqmaasuqa inta badan barnaamijyadooda telefoonka joojisid shaqada sababaya maqal la'aan xogta waaweyn ee. musuqmaasuqa card SD dhacaa sabab u ah virus ama software musuqmaasuq. Xitaa haddii aad ka saarto virus ama software, waxaa jira fursad wanaagsan oo laga badiyay xog muhiim ah aad. Cillad Hardware sidoo kale waxay keeni karaan khasaaraha xogta ugu waaweyn. 2. Mararka qaarkood app ah sidoo kale waxay sababi karaan khasaare xogta. Chine badan oo ay helaan xog xasaasi boggayaga phone sida xiriirada, fariimaha iyo qaar badan. 3. Marmarka qaarkood updates sidoo kale waxay keeni karaan khasaaraha xogta. Xaaladdan oo kale, update ku guuldareysto intii lagu rakibo, ayna telefoonka aad iyo hab kabashada aad telefoon ku waayi kartaa xog muhiim ah.
Sidee inuu ka soo kabsado files tirtiray ka qalab Samsung Galaxy
Wondershare Dr.Fone for Android (Android Data Recovery) waa software kabashada in caawiyo si aad u hesho xogta lumay ka qalab aad. Waxaad ku rakibi kartaa on your computer iyo xirmaan telefoonka Samsung Galaxy via cable. Waxaad soo kaban karto xogta sida xiriirada, fariimaha, files warbaahinta iwm
Waxaad soo kaban karto xogta si aad u computer ama telefoon. Waxa kale oo aad soo kaban karto xogta aad ka hesho ilo daruur.
Noocyada xogta aad soo kaban karto waxaa ka mid ah sawirrada, xiriirada, SMS, waraaqaha, jadwalka, qoraalo, xusuusinta, Deymaha maqan, Bookmarks iyo qaar badan.
Software kaa caawinaysaa in aad soo kabsado xogta, taas oo ay sababta loo waayey dib warshad, dhaawac, shil iyo Laydh iftiimaya ROM.
Waxaad kaloo isticmaali kartaa software in la dayactiro aad android.
Waxaa intaa dheer, waxa uu leeyahay muuqaalada in kuu ogolaanayaa inaad ku eegaan files soo kabashada.
Design ee software-ka waa dareen leh, fududahay in la isticmaalo iyo hanuunin aad nidaamka.
Sidee inuu ka soo kabsado xogta laga qalabka Samsung Galaxy in tallaabooyinka
Tallaabada 1. Ku rakib software oo ku abuurtaan ku saabsan telefoonka. Marka software yahay, xiriiriyaan phone in computer iyo ha software lagu ogaan telefoonka.
Tallaabada 2. Haddaba tag si ay u bilaabaan baaritaan si loo bilaabo nidaamka. Software iskaan doonaa iyada oo qalab aad. Marka scan waa dhameystiran u qor doonaa xogta aad soo kaban karto, in qalab aad. Waxaad ka eegi kartaa guddi ka tagay iyo in la hubiyo macluumaadka waxaa laga.
Tallaabada 3. Laga bilaabo hogaanka waxaad ka raadin kartaa macluumaadka aad u baahan inuu ka soo kabsado si gaar ah. Waxaad toggle karaan fursadaha ay u arkaan macluumaadka la tirtiro. Hadda riix kabsado si loo bilaabo nidaamka soo kabsado.
Maxaa dhacaya haddii ay qalab Samsung Galaxy waa in Recovery Mode?
Hab Recovery kaa caawinaysaa in aad si ay u maareeyaan telefoonka ka xididka. Si kastaba ha ahaatee, ka dib markii firmware updates telefoonka uga istaagi laga yaabaa inay eegtaa waxay sabab u update rakibo aan habboonayn. Telefoonkan hayaa bilaabo in si hab-kabashada iyo shilalka soo baxay. Waa sidan sidii aad xal u heli karo arrinta hab dib u soo kabashada,
Shuruudaha: Oden, file dhif firmware, cable iyo computer.
Tallaabada 1. Open Oden software on your computer iyo ka tago goobaha default sida uu yahay. Hadda sax file PDA iyo geliyaan faylka daamur firmware.
Tallaabada 2. Guuleysatey telefoonka on hab download. Waxaad ka heli kartaa isku-dar ah button xaq u leedahay in in. Waxaa sida caadiga ah waa xoog iyo button mugga. Connect qalab si aad u computer. Marka taleefanku xiran yahay waxaad arki doontaa ID: com doorsoon.
Tallaabooyinkan waxay kaa caawin kartaa inaad si fudud looga hortago khasaaro xogta. Ha welwelin ku saabsan khasaaraha xog kasta oo dheeraad ah, u isticmaalaan maanta Wondershare!
Step3. Hadda riix badhanka bilowdo iyo habka dhameysatay dhamaystiran ha iyo telefoonka si toos ah rebooted doonaa hab-kabashada iyo kaliya bilaabi telefoonka. Waxaa si toos ah u bilaabi doonaa.
Qalabka Samsung Galaxy Hot
Galaxy ayaa bilaabay telefoonada cusub ee taxanahan la naqshado fiican iyo muuqaalada updated. E iyo A ku cusub-taxane sub barayaa leh ee taxanahan Galaxy. Halkan waxaa ugu sareysa 5 telefoonka ugu kulul ee taxanahan Galaxy:
1. Galaxy qod6
Waa cadadkii ugu dambeeyay ee taxanahan Timid jirka bir adag, qaab ciyaareed cajiib ah oo screen weyn. Waa mid ka mid ah telefoonka daaraysaa ee taxanahan.
2. Galaxy qod6 Edge
feature New Edge ee Galaxy qod6 waxaa telefoon gaar ah ka dhigaysa oo ku siinayaa ma aha oo kaliya phone raadinaya weyn laakiin ay timaado la muuqaalada ku laayeen la yaab leh.
Waa mid ka mid ah telefoonada cusub midrange siinaya macdan fiirin cusub. Waxaa aad slimmer iyo xumbo telefoonada fursdao.
Powered la qaabeynta awood badan oo design cusub ee taxanaha Galaxy E telefoonada siinayaa khibrad user weyn.
A7 waa mid ka mid ah lagu daydo cusub la jirka macdan Yimid fiirin cusub ee casriga ah Samsung. Waa caato ah, iftiinka iyo ku siinayaa qaab cajiib ah.
5 wax aad qabto in aad ka ogaato Samsung auto gurmad
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Facebook Rasuulka Messages on Android
Data Transfer in New Android Phone ee One Click
> Resource > Android > Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Faylal ay ku Samsung Galaxy